फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुका लागि आयो दुःखद खबर ! – Online Marg
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुका लागि आयो दुःखद खबर !
Posted on Friday, September 27th, 2019 11:31 AM by online marg
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले पोस्टमा भएको लाइकको संख्या लुकाउने बारेको परीक्षण गरेको छ ।
यसका लागि फेसबुकले शुक्रबार अर्थात आजबाट यसको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अस्ट्रेलियामा यसको परीक्षण गरिने छ । प्रयोगकर्ताको पोस्टमा ‘लाइक’को सङ्ख्या लुकाइने फेसबुकले तयारी गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाका कतिपय प्रयोगकर्ताले शुक्रवारबाट अर्काको पोस्टमा गरिएका ‘लाइक’को सङ्ख्या वा जनाइएका प्रतिक्रिया हेर्न पाउने छैनन् । गत जुलाई महिनामा यो विवादास्पद परिवर्तनको परीक्षण इन्स्टाग्राममा शुरू गरिएको थियो ।
प्रयोगकर्तामाझ सामाजिक दबाव घटाउने प्रयासस्वरूप ‘लाइक’को सङ्ख्या घटाउन चाहेको फेसबुकको भनाइ छ । आफ्ना पोस्टमा चाहिँ गरिएका ‘लाइक’को सङ्ख्या प्रयोगकर्ताले हेर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीकी प्रवक्ता मिआ गार्लिकले अस्ट्रेलियन एसोशिएटेड प्रेसलाई भनिन्, “लाइक वा पोस्टमा जनाइएका प्रतिक्रियाको सङ्ख्यामा भन्दा अन्तरक्रिया तथा विषयस्तुको गुणस्तरबारे मान्छेले ध्यान दिऊन् भनेर हामीले सङ्ख्याको कुरा हामीले हटाउन लागेका हौँ।” यो परिवर्तनबारे आफूहरूले मानसिक स्वास्थ्यविज्ञ तथा एन्टिबुलिङ अर्थात् अर्कालाई होच्याउने कामविरुद्धका समूहहरूसँग छलफल गरेको गार्लिकले बताइन् ।
यसै महिनाको शुरूतिर हङ्‍कङकी एकजना इन्जिनियरले आफ्नो ब्लगमा भनेकी थिइन्, उनले फेसबुकको एन्ड्रोइड एफमा आफूले एक प्रकारको कोड फेला पारेको बताएकी थिइन् जसअनुसार फेसबुकले ‘लाइक’को सङ्ख्या हटाउने परीक्षण गरिरहेको थियो ।
‘लाइक’को सङ्ख्या व्यापारिक प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो भएको भन्दै कतिपय प्रभावशाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले परिवर्तन ल्याउने कदमको आलोचना गरेका छन् । तर यो परिवर्तनसम्बन्धी परीक्षणको समय बढाइने वा त्यसलाई स्थायी बनाइने विषयमा फेसबुकले केही बताएको छैन ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि आयो दुःखद खबर !
फेसबुक प्रयोगकर्ताका डाटा असुरक्षित हुन थालेपछि फेसबुकले हजारौँ एपहरु नि�
गुगलबाट आयो यस्तो गज्जबको खबर
गुगलले आगामी दुई वर्षभित्र युरोपियन डाटा सेन्टरका लागि थप ३ बिलियन युरो लग�
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले नछुटाउनुहोला
तपाई फेसबुक चलाउनु हुन्छ, दिनहुँ अनेक पोस्ट गर्नु हुन्छ, गर्नुस केहि आपत्ति
फेसबुकले यसरी थाहा पाउँछ सेक्स गरेको !
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले यौन जीवन र अन्तरङ्ग सम्बन्धकाबारेमा पनि थाहा पाउन�
फेसबुकमा सोचेजति लाइक आउदैन ? यसो गरेर त हेर्नुस
धेरैको फेसबुकमा सोचेजति लाइक आउदैन । फेसबुकमा लाइक पाउन जसलाई पनि मन लाग्छ �
यी युवकले कमाल गरे
एक युवकले उपकरण आविष्कार गरेर कमालको काम गरेका छन । बुटवलका यी युवकले सवारी
गुगलले गर्यो यस्तो खतरनाक गल्ती, अब के हुन्छ ?
गुगलले फेरी अर्को गल्ती गरेको छ । गुगल सर्च इन्जिनमा विभिन्न सामग्रीहरु खो�
कक्षा १२ को पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरद्व�
एमबिबिएस इन्ट्रान्स परीक्षा दिनेहरुका लागी आयो अत्यन्तै जरुरी खबर
सर्वोच्च अदालतले भोलि शनिबार हुन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतक�
मोबाइल फोन कति प्रयोग गर्ने ?
मोबाइल बिना एक घण्टा बिताउन पनि अब मुस्किल भइसक्यो मान्छेलाई । तर, मोबाइल फो